बिरामी निको भएर घर फर्कन थाले - समय-समाचार
समय-समाचार बिहीबार, २०७८ वैशाख २३ गते, १३:४५ मा प्रकाशित
Medical staff tend toapatient in the emergency COVID-19 ward at the San Carlo Hospital in Milan, Italy, Thursday, April 16, 2020. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death. (AP Photo/Antonio Calanni)
राँझा– बाँकेमा उपचारका लागि भर्ना भएका थप १० कोरोना सङ्क्रमितको गए राति अस्पतालमै मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा नौ बाँकेका र एक जाजरकोटका रहेका छन् । गए रातिदेखि आज बिहान ७ः०० बजेसम्म उपचारका क्रममा अस्पतालमै उहाँहरुको मृत्यु भएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका स्रोत व्यक्ति तेज वलीले जानकारी दिनुभयो ।
तम्घास– गुल्मीमा कोरोना परीक्षणका लागि एन्टिजेन्ट किट अभाव भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट आएको दुई हजार किट सकिन थालेसँगै जिल्लामा किट अभाव भएको हो ।
प्रदेश सरकारले तम्घास अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयका लागि पठाएको किट गुल्मीको स्वास्थ्य कार्यालयले महामारीलाई मध्यनजगर गर्दै पालिकालाई पनि प्रदान गरेको थियो । ती पालिकाले अहिलेसम्म किट खरिद गरेका छैनन् भने स्वास्थ्य कार्यालयसँग खरिद गर्ने बजेट अभावका कारण किट अभाव भएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयले मुसिकोटलाई २५०, धुर्कोट, रुरुक्षेत्र र मदानेलाई दुई÷दुई सय किट उपलब्ध गराएको थियो । अन्य पालिकाका लागि २५ देखि ७५ किट स्वास्थ्य कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ भने तम्घास अस्पतालका लागि ७०० किट उपलब्ध गराएको छ । त्यसमध्ये छत्रकोटमा किट सकिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयमा अब १२५ किट मात्रै बाँकी छ ।
तम्घास अस्पतालमा दैनिक ५० किटसम्म खर्च हुन्छ । यही अवस्था निरन्तर रहिरहे बढीमा तीन दिनमा किट सकिने स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा भवानी शर्माले बताउनुभयो । अब पालिकालाई किट आवश्यक परे आफँै खरिद गर्न पालिकालाई पत्राचार गरिएको शर्माको भनाइ छ ।
आफूहरुले प्रदेश सरकारसँग किटको माग गरे पनि आउने कुनै निश्चित नभएको शर्माले बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले स्थानीय तहले आफँै खरिद गर्नुपर्ने र संयोजन स्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने बताउनुभयो ।
अस्पतालका सन्दर्भमा नगरपालिकाले खरिद गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रशासनको विपत्को रकमबाट किट किन्न नमिल्ने र पालिकाले आफैँ खरिद गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मालिका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य अधिकृत वसन्तराज भुसालले एन्टिजेन किटभन्दा पनि पिसिआर ल्याब सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बगनासकाली– पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले कोरोना सङ्क्रमितका घरघरमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण शुरु गरेको छ । यही वैशाख १३ गते गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार सङ्क्रमितको घरमै पुगी स्वास्थ्य सामग्री वितरण शुरु गरिएको हो । वैशाख १७ गतेदेखि कोरोना सङ्क्रमित भई घरमै आइसोलेशनमा बसेका सङ्क्रमितका लागि स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको हो ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता लक्ष्मी अधिकारीका अनुसार कोरोना सङ्क्रमित भई घरमै आइसोलेशनमा बसेकाको स्वास्थ्योपचारका लागि गाउँपालिकाले घरमै सेवा दिन थालेको छ । घरमै बसेकाहरुले ज्वरोदेखि, अक्सिजनसमेत घरमै मापन गर्न सकुन् र शक्तिवद्र्धक औषधि खाएर निको गराउने उद्देश्यले घरमै सेवा दिएको अधिकारीको भनाइ छ । यो अभियान निरन्तर राख्नेसमेत उहाँको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार सहज र सर्वसुलभ बनाउन घरमै स्वास्थ्य उपचार गराउने निर्णय गरेको थियो । बुधबारसम्म बगनासकालीमा ३८ सङ्क्रमित रहेको र नौ सङ्क्रमितको घरमै पुगी स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पालिकाले सङ्क्रमितको अवस्थानुसार आवश्यक उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको बताउनुभयो ।